Russian zakudala iresiphi rassolnik
Ukudla kanye iziphuzo, Amasobho
Ehlobo, njengoba umthetho, abantu abaningi bathanda yemifino isobho ukukhanya, kodwa uma dank futhi manzi, futhi umzimba udinga ukufudumala kanye namandla, kahle efudumele eqotho ukudla kuqala. Lokhu borscht futhi iklabishi isobho sauerkraut, kanye umhlakanya okunomsoco. Ayikho ethandwa kancane futhi amanzi okugqumisa. Kodwa izindlela lokhu dish - ezihlukahlukene kakhulu. Ubani upheka isobho okumnandi ne ukwengeza irayisi, umuntu Ufaka Pshenko. Kodwa uyini zakudala iresiphi rassolnik? Oda isobho, okuyinto baye baqala ukulungiselela eRussia ngekhulu le-15 futhi lapho yayibizwa kanjalo ngaleso sikhathi Kalia? Ake sizame ukuqonda.
Indlela sasenziwa ibhali (ngezithombe ingatholakala lapha) kuhilela ezintathu isakhi esiyinhloko. Okokuqala, kungcono ukhukhamba okuzenzela, pearl ibhali kanye, yebo, inyama. Kodwa kukhona okuhlukile, eyavela kamuva kakhulu: ibhali ungayithola enye by irayisi, inyama bese besebenzisa amanye izinso.
Amanzi okugqumisa, iresiphi zakudala
600 g yenkomo, okungcono nge bone;
ukhukhamba - 300 g;
100 g pearl ibhali;
izaqathe kanye anyanisi;
amakhambi fresh and izinongo.
Classic iresiphi rassolnik, ukulungiselela izinyathelo:
Beka phezu kwesitofu ukupheka inyama. Ukuze umhluzi kwakwehla esiphundu, kutuswa ukwengeza kuwo wonke anyanisi.
Phakathi naleso sikhathi, ukukuthinta ikhukhamba. Amazambane uthathe cubes ezincane, nquma anyanisi bese isanqante. On the gazinga evuthayo uwoyela anyanisi, bese - engeza izaqathe.
Uma inyama iphekwe kanye umhluzi iyoba ukunambitheka ocebile, inyama kufanele sifinyelele futhi zezikhali zibe yizicucu a la Carte. Kungaleso sikhathi kuphela lapho lungabuyiselwa kuya pan bese wengeza amazambane. Ngakolunye uhlangothi, ungakwazi ukusika inyama zibe yizicucu amancane ngesikhathi esisodwa, bese umhluzi iphekwe ngokushesha, futhi ngeke kudingeke ukuba ashise iminwe yakho kwi yenkomo ashisayo, ukuzama ukuthatha ke ngaphandle.
Khumbula! Akunakusetshenziswa ungakwazi ngokushesha engeza ukhukhamba, noma amazambane iyoba ezinzima futhi ngokuphelele kunganambitheki. Yingakho yakudala iresiphi rassolnik sebekubeke uyayilahla ukusetshenziswa Multivarki njengoba lapho kwakulele zonke imifino ndawonye.
Uma izinyane amazambane, engeza oqoshiwe noma ogayiwe ukhukhamba futhi zazharku zika-anyanisi kanye isanqante.
Manje yini ekhathaza ibhali: kufanele kube pre-thumba kuze cishe kuphekwe epanini ehlukile bese wengeza usawoti lapho upheka kahle. Uma isobho engeza iqolo eluhlaza, umhluzi iyoba esinamafu futhi akuthandeki.
Ngemva ngokungeza zonke izithako amanzi okugqumisa isicishe ilungele, kufanele kwenzeke ukuba kuncishiswe umlilo phezu kwesitofu bese isidlo hhayi ngaphansi kwesigamu sehora. Amanzi okugqumisa isobho akufanele, futhi ukuthuthukisa ukunambitheka, ungakwazi ukwengeza brine kusukela ukhukhamba.
Ukuze amaminithi ambalwa kuze kuphekwe add lavrushku kanye namakhambi fresh, parsley kungcono ukusebenzisa, kokubili fresh futhi ifomu omisiwe.
Classic iresiphi rassolnik weluleka ukusuthisa isobho elishisayo ukhilimu omuncu futhi ethambile elimnandi nesinkwa. Kodwa konke kuncike ukunambitheka yakho, isibonelo, ungasebenzisa ukhilimu omuncu esikhundleni imayonnaise noma kungekho imikhiqizo yobisi wanezela.
Shurpa - isobho odabuka Uzbekistan
Indlela Yokuthola mushroom isobho
Amasobho Ukuqina: zokupheka ngezithombe
Isobho okumnandi nge inkukhu izinhliziyo. zokupheka
Indlela ukupheka isobho nge-pasta (nge inyama nemifino)
Ukuthi ingane kufanele ukwazi 1 inyanga noma ngaphezulu?
Izimpawu amaqhawe "Ngemva Ball" kanye sifinyeto imisebenzi L. N. Tolstogo
Ukungaphili engqondweni - kuyinto komqondo senile
Ekrn.exe - kuyini? Kuthiwani uma uhlelo umkhumbi ekrn.exe? Indlela ukususa ekrn.exe?
Far East: Amathemba ukuthuthukiswa (izici jikelele)
Isevisi "yokukhokha ukukhokha"
Snake titanoboa - ugogo giant boa yesimanje
"Rama" - ibhotela noma ukusakaza?
Welding semi-automatic "Resanta Saipov-165": incazelo kanye nokubuyekeza
Zamagama ngesiSlavonic. IsiSlavonic Esidala zamagama - ukubaluleka izinhlamvu. izinhlamvu lwamaSlav
Ukukhuluphala: izimbangela, ukwelashwa kanye nokuvinjelwa. Ukuvimbela ukukhuluphala ngokweqile kwezingane nentsha
Izidakamizwa "Neoton": isitatimende